Porn အသုံးပြုခြင်းနှင့်လိင်စွဲလေ့လာခြင်း - သင်၏ ဦး နှောက်သည် Porn တွင်
ဤအပိုင်းကို“ Porn အသုံးပြုခြင်းနှင့်လိင်စွဲခြင်းလေ့လာခြင်း” ဟုခေါ်ဝေါ်သော်လည်းအင်တာနက်ညစ်ညမ်းမှုသည်လိင်စွဲလမ်းမှုမဟုတ်ပါ Porn စွဲလိင်စွဲလမ်းသည်မဟုတ် - အဘယ်ကြောင့်အရေးပါ) ။ အင်တာနက်ကညစ်ညမ်းစွဲနေဖြင့်စဉ်းစားသည် အများအပြားကျွမ်းကျင်သူများက အင်တာနက်စွဲ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ရန်။
YBOP သည်ညစ်ညမ်းမှုလေ့လာမှုစာရင်းများစွာကိုဖန်တီးထားသည်။ link ၏ရှေ့မှောက်တွင် L (L) သည်ပုံမှန်အားဖြင့်လေ့လာမှုတစ်ခုနှင့် ပတ်သက်၍ ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်ကိုညွှန်ပြသည်။
porn / လိင်စွဲ? ဤစာမျက်နှာကိုစာရင်း 56 ကျော်အာရုံကြောသိပ္ပံ -based လေ့လာမှုများ (MRI, fMRI, EEG, neuropsychological, ဟော်မုန်း) ။ ၎င်းတို့၏တွေ့ရှိချက်များကိုပစ္စည်းဥစ္စာစွဲလေ့လာမှုများအစီရင်ခံသည့်အာရုံကြောတွေ့ရှိချက် mirror အဖြစ်သူတို့စွဲမော်ဒယ်ခိုင်မာသောထောက်ခံမှုပေး။
porn / လိင်စွဲလမ်းပေါ်တွင်စစ်မှန်သောကျွမ်းကျင်သူများက '' ထင်မြင်ချက်များ? ဤစာရင်းတွင်ပါဝင်ပါသည် 34 မကြာသေးမီကစာပေပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း & ဝေဖန်သုံးသပ်ချက် ကမ်ဘာပျေါတှငျထိပ်အာရုံကြောဆိုင်ရာသိပ္ပံပညာရှင်အချို့ဖြင့်ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။ လူအားလုံးတို့သည်စွဲမော်ဒယ်ထောက်ခံပါတယ်။
porn နှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြဿနာများ? ဤစာရင်းတွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုမှ porn အသုံးပြုမှု / ညစ်ညမ်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြဿနာများစွဲခြင်းနှင့်နိမ့် arousal ချိတ်ဆက် 40 လေ့လာမှုများကျော်ပါဝင်သည်။ အဆိုပါ, fအဆိုပါစာရင်းထဲတွင် irst7လေ့လာမှုများကိုသရုပ်ပြ causation, သင်တန်းသားများအဖြစ် porn အသုံးပြုမှုကိုဖယ်ရှားပစ်ခြင်းနှင့်နာတာရှည်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလုပ်မဖြစ်အနာကိုငြိမ်းစေ။
ဆက်ဆံရေးအပေါ် porn ရဲ့သက်ရောက်မှု? 80 ကျော်လေ့လာမှုများလျော့နည်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်ဆက်ဆံရေးဟာစိတ်ကျေနပ်မှုပေးရန် porn အသုံးပြုမှုလင့်ထားသည်။ (အမျှဝေးကြှနျုပျတို့သိအဖြစ် အားလုံး ယောက်ျားနဲ့ပတ်သက်တဲ့လေ့လာမှုတွေဆက်စပ်ပိုပြီး porn အသုံးပြုမှုကိုအစီရင်ခံတင်ပြကြပါပြီ ဆင်းရဲတဲ့ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာသို့မဟုတ်ဆက်ဆံရေးဟာစိတ်ကျေနပ်မှု။ )
ယုံကြည်ချက်, သဘောထားနှင့်အပြုအမူထိခိုက် porn အသုံးပြုမှု? တစ်ဦးချင်းစီလေ့လာမှုများထုတ်စစ်ဆေး: 40 ကျော်လေ့လာမှုများအမျိုးသမီးများနှင့်လိင်အရအခွင့်အရေးအမြင်များဆီသို့ "ကို un-သာတူညီမျှသဘောထား" ကိုညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုလင့်ထားသည် - ဤ 2016 Meta-analysis သည်ကနေဒါမှမဟုတ်အကျဉ်းချုပ်: မီဒီယာနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ: ကိုလက်တွေ့သုတေသနပြည်နယ်, 1995-2015.
အင်တာနက်အသုံးပြုခြင်းနှင့်ညစ်ညမ်းမှုအသုံးပြုခြင်းကိုပြသထားသောလေ့လာမှု ၉၀ ကျော်၊ အနှုတ်လက္ခဏာဆောင်သောရလဒ်များနှင့်ရောဂါလက္ခဏာများနှင့် ဦး နှောက်ပြောင်းလဲမှုများကိုဖော်ပြသည်
ဒီကိုကြည့်ပါ ကျော်များအတွက်စာမျက်နှာ ညစ်ညမ်းမှုကိုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျူးလွန်ခြင်း၊ ထို့အပြင်မကြာခဏထပ်ခါတလဲလဲပြောဆိုခြင်းသည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများရရှိခြင်းသည်မုဒိမ်းမှုနှုန်းကိုကျဆင်းစေသည်ဟုကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်ဝေဖန်မှုများဖြစ်သည်။
နှစ်ခုဆေးဘက်ဆိုင်ရာဆရာဝန်များအားဖြင့်ဒီ 2015 စက္ကူကိုကြည့်ပါ: တစ်ဦးရောဂါအဖြစ်လိင်စွဲ: အကဲဖြတ်ဘို့အထောက်အထား, Diagnosis နှင့်ဝေဖန်သူများမှတုံ့ပြန်မှုတစ်ဦးကိုထောက်ပံ့ပေးရာ ကနေဇယား ကြောင်းတိကျသောဝေဖန်မှုများအပေါ်ကြာသူတို့ကိုတန်ပြန်ကြောင်းကားအညွှန်းပေးထားပါတယ်။
အင်တာနက်စွဲလမ်းမှုအမျိုးအစားများနှင့်သက်ဆိုင်သည့်အာရုံကြောသိပ္ပံစာပေကိုစေ့စေ့စပ်စပ်ပြန်လည်သုံးသပ်ရန်အင်တာနက်ညစ်ညမ်းမှုကိုအထူးအာရုံစိုက်သည့်အနေဖြင့် - အင်တာနက်ကိုညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံစွဲ၏ neuroscience: တစ်ဦးကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် Update ကို (2015) ။ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံလွှာသည်ညစ်ညမ်းသောစွဲလမ်းမှုအားဖြိုခွဲရန်ရည်ရွယ်သည့် EEG လေ့လာမှုနှစ်ခုကိုပြန်လည်သုံးသပ်သည်။
ဘာစွဲ (2015)။ ကောက်နုတ်ချက်များ -“မကြာသေးမီဆောင်းပါးတွေမှာတော့ဘာစွဲအင်တာနက်စွဲတစ်ဦးသတ်သတ်မှတ်မှတ်အမျိုးအစားစဉ်းစားသည်။ လက်ရှိလေ့လာမှုအချို့အရဆိုက်ဘာဆက်ဆံမှုစွဲလမ်းမှုနှင့်အင်တာနက်ဂိမ်းကစားခြင်းဆိုင်ရာပြသနာကဲ့သို့သောအခြားအမူအကျင့်ဆိုင်ရာစွဲလမ်းမှုများအကြားပြိုင်ဆိုင်မှုများကိုစစ်ဆေးခဲ့သည်။ cue-reactivity နှင့်တဏှာသည် cyberex စွဲလမ်းမှုတွင်အဓိကအခန်းကဏ္ play မှပါဝင်သည်။ Neuroimaging လေ့လာမှုများသည် cybersex စွဲလမ်းမှုနှင့်အခြားသောအမူအကျင့်ဆိုင်ရာစွဲလမ်းမှုတို့အပြင်အရာ ၀ တ္ထုမှီခိုမှုအကြားအဓိပ္ပာယ်ပြည့်ဝသောတူညီသည့်အရာများ၏ယူဆချက်ကိုထောက်ခံသည်။
အင်တာနက်ကိုညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလုပ်မဖြစ်စေသလဲ? လက်တွေ့အစီရင်ခံစာများ (2016) နဲ့တစ်ဦးကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း - US ရေတပ်ဆရာဝန်များနှင့် Gary Wilson တို့၏ညစ်ညမ်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြproblemsနာများနှင့်ပတ်သက်သည့်စာပေများကိုကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်ပြန်လည်သုံးသပ်သည်။ ပြန်လည်သုံးသပ်မှုတွင်လူငယ်များလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြproblemsနာများမြင့်တက်လာကြောင်းဖော်ပြသည့်နောက်ဆုံးပေါ်ဒေတာများကိုဖော်ပြထားသည်။ စက္ကူတွင်အပြာစွဲစွဲခြင်းနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအေးစက်ခြင်းနှင့်ဆက်စပ်သောအာရုံကြောဆိုင်ရာလေ့လာမှုများကိုလည်းပြန်လည်သုံးသပ်သည်။ ညစ်ညမ်းသောလိင်ဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှုကိုဖော်ထုတ်သောအမျိုးသားများနှင့်ပတ်သက်သည့်ဆေးမှတ်တမ်း ၃ ခုသည်ဆရာဝန်များကဖော်ပြသည်။ Gary Wilson မှ ၂၀၁၆ ခုနှစ်ဒုတိယစာတမ်းတွင်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများအသုံးပြုခြင်းကိုရှောင်ကြဉ်ခြင်းဖြင့်ညစ်ညမ်းမှု၏အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုလေ့လာခြင်း၏အရေးကြီးပုံကိုဆွေးနွေးထားသည်။ ၎င်း၏အကျိုးသက်ရောက်မှု (2016) ဖော်ပြမှနာတာရှည်အင်တာနက်ကိုညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံအသုံးပြုမှုပပျောက်။
ဤပြန်လည်သုံးသပ်ချက် - compulsive လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ၏ Neurobiology: လွန်မြောက်သိပ္ပံ (2016) - နိဂုံးချုပ်သည်ပေးထား CSB နှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးစွဲလမ်းမှုကိုအကြားအချို့တူညီ, ကြားဝင် စွဲလမ်းမှုကိုအဘို့အထိရောက်သောအရှင်သည် CSB ဘို့ဂတိတော်ကိုကိုင်စေခြင်းငှါ ဒီဖြစ်နိုင်ခြေအားစုံစမ်းစစ်ဆေးရန်အနာဂတ်သုတေသနလမ်းညွန်သို့ထိုးထွင်းသိမြင်မှု တိုက်ရိုက်။ "
အတင်းအကျပ်ပြုတတ်သောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေကို (CSB) ၏တစ်ဦးက 2016 ပြန်လည်သုံးသပ် - တစ်ခုစွဲထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ compulsive သငျ့သလော (2016) ": - ကောက်ချက်ချထပ် features တွေ CSB နှင့်ပစ္စည်းဥစ္စာအသုံးပြုမှုမမှန်အကြားတည်ရှိနေ။ ဘုံ neurotransmitter စနစ်များ CSB နှင့်ပစ္စည်းဥစ္စာအသုံးပြုမှုမမှန်အထောက်အကူပြုစေခြင်းငှါ, မကြာသေးမီ neuroimaging လေ့လာမှုများတဏှာနှင့်အာရုံကိုဘက်လိုက်မှုနှင့်စပ်လျဉ်းတူညီမီးမောင်းထိုးပြ။ " လိင်စွဲလမ်းမှုတည်ရှိမှုကိုထောက်ပံ့ပေးသောအာရုံကြောသိပ္ပံအများစုသည်လိင်စွဲလမ်းသူများမဟုတ်ဘဲညစ်ညမ်းသူများအားလေ့လာမှုများမှအမှန်တကယ်လာသည်။ အင်တာနက်စွဲလမ်းမှုနှင့်လိင်စွဲစွဲလမ်းမှုကစက္ကူကိုအားနည်းစေသည်။
တစ်အပြုအမူစွဲအဖြစ် compulsive လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ: အဆိုပါအင်တာနက်သက်ရောက်မှုနှင့်အခြားကိစ္စများ (2016)။ ကောက်နုတ်ချက်များ -“ဤအပြဿနာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူလွယ်ကူချောမွေ့စေခြင်းငှါအဖြစ်ကိုပိုမိုအလေးပေးအင်တာနက်များ၏ဝိသေသလက္ခဏာများပေါ်လိုအပ်ပါသည်။"နှင့်"ကူညီခြင်းနှင့်ထိုကဲ့သို့သောတစ်ဦးချင်းစီပြုမူဆက်ဆံသောသူတို့အထဲကနေလက်တွေ့အထောက်အထားစိတ်ရောဂါအသိုင်းအဝိုင်းများက သာ. ကြီးယုံကြည်လက်ခံရပါမည်။ "
“ hypersexuality” ဟူသောဝေါဟာရကိုစွန့်ပစ်သင့်သော်လည်း Max Planck အာရုံကြောသိပ္ပံပညာရှင်များကပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းကိုပြုလုပ်သည် Hypersexuality ၏ Neurobiological အခြေခံ (2016)။ ကောက်နုတ်ချက်: "အတူတူယူအထောက်အထားဖြစ်စဉ်ကိုဆုလာဘ် hypersexuality ပေါ်ပေါက်ရေးအတွက်အဓိကအခန်းကဏ္ဍမှပါဝင်သောတိုကျရိုကျပေါ်၌ရှိသောအမြှေးမြားတှငျပွောငျးလဲ, amygdala, hippocampus, hypothalamus, septum နှင့်ဦးနှောက်ဒေသများကြောင်းဆိုလိုဟန်ရှိသည်။ မျိုးရိုးဗီဇလေ့လာမှုများနှင့် neuropharmacological ကုသမှုချဉ်းကပ်သည့် dopaminergic စနစ်၏တစ်ဦးပါဝင်ပတ်သက်မှုမှာထောက်ပြတာပါ။"
ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံစွဲ၏ Neurobiology - တစ်ဦးကလက်တွေ့သုံးသပ်မှု (2017) - ကောက်နှုတ်ချက်: စုစုပေါင်း 59 ဆောင်းပါးများသုံးသပ်ချက်များ, mini ကိုပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းများနှင့်ညစ်ညမ်းပါသည်, စွဲလမ်းနှင့် neurobiology များ၏ကိစ္စရပ်များတွင်မူရင်းသုတေသနစာတမ်းများထည့်သွင်းထားတဲ့ဖော်ထုတ်ခဲ့ကြသည်။ ဒီနေရာမှာပြန်လည်သုံးသပ်အဆိုပါသုတေသနစာတမ်းများညစ်ညမ်းစွဲများအတွက် neurobiological အခြေခံ elucidated သောသူတို့အပျေါဗဟိုပြုခဲ့ကြသည်။ ဒါဟာနောက်ထပ်ညစ်ညမ်းစွဲနှင့်ကြည့်ရှုမယ့်စိတ်ပျက်စရာလက္ခဏာသည်အဘယ်မှာရှိလူနာများနှင့်အတူပုံမှန်အလုပ်မလုပ်သူစာရေးဆရာနှစ်ဦးစလုံး၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးလက်တွေ့အတွေ့အကြုံနှင့်အတူဖြည့်ဆည်းပေးခဲ့သည်။
အဆိုပါ ICD-11 (ထဲမှာ compulsive လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူရောဂါ: ပညာရေးဆိုင်ရာ, ခွဲခြား, ကုသမှုနှင့်အပေါ်မူဝါဒရေးရာချမှတ် Commentary မြှင့်တင်Kraus et al။ , 2018) - ကောက်နှုတ်ချက်: အခြားမော်ဒယ်များအဆိုပြုထားပြီအဖြစ်ချင်တဲ့ဒေါသစိတ်နဲ့-ထိန်းချုပ်မှုရောဂါအဖြစ် CSB ရောဂါခွဲခြားလက်ရှိအဆိုပြုလွှာ (အငြင်းပွားဖွယ်ရာဖြစ်ပါသည်Kor, Fogel, Reid, & Potenza, 2013) ။ ကြောင်း CSB ရှယ်ယာစှဲနှင့်အတူအများအပြား features တွေအကြံပြုခြင်းဒေတာ (ရှိပါတယ်Kraus et al ။ , 2016), ခေါ်ဆောင်သွားလှုံ့ဆော်မှုနဲ့ဆက်စပ်တွေကိုတုန့်ပြန်ဆုလာဘ်-related ဦးနှောက်ဒေသများတိုးမြှင့် reactivity ကိုညွှန်ပြမကြာသေးမီဒေတာအပါအဝင် (ကုန်အမှတ်တံဆိပ် Snagowski, Laier, & Maderwald, 2016; Gola, Wordecha, Marchewka, & Sescousse, 2016; Gola et al ။ , 2017; Klucken, Wehrum-Osinsky, Schweckendiek, Kruse, & Stark, 2016; Voon et al ။ , 2014
ပြproblemနာဆိုင်ရာညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများအသုံးပြုခြင်းနှင့်ဆက်စပ်သောသိမြင်မှုဖြစ်စဉ်များ - စမ်းသပ်လေ့လာမှုများကိုစနစ်တကျပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း (၂၀၂၁) - ကောက်နှုတ်ချက်: လက်ရှိစာတမ်းတွင် PPU ၏အခြေခံသိမြင်မှုဖြစ်စဉ်များကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးမှု ၂၁ ခုမှရရှိသောအထောက်အထားများကိုကျွန်ုပ်တို့ပြန်လည်ဆန်းစစ်။ ပြုစုသည်။ အတိုချုပ်ပြောရလျှင် PPU သည် (က) လိင်စိတ်လှုံ့ဆော်မှုကိုဂရုပြုခြင်း၊ (ခ) ချို့တဲ့သောတားဆီးထိန်းချုပ်မှု (အထူးသဖြင့်မော်တာတုံ့ပြန်မှုတားစီးခြင်းနှင့်ပြproblemsနာများနှင့်ဆီလျှော်မှုမှလှုံ့ဆော်မှုများမှအာရုံစိုက်မှုကိုဖယ်ရှားရန်)၊ အလုပ်လုပ်သောမှတ်ဉာဏ်အားအကဲဖြတ်ခြင်းနှင့် ()) ဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်းချို့ယွင်းခြင်း (အထူးသဖြင့်ရေတိုအကျိုးအမြတ်အတွက်ကာလတိုအကျိုးအမြတ်အတွက် ဦး စားပေးမှုများ၊ erototica အသုံးပြုသူများထက် ပိုမို၍ ထကြွလွယ်သောရွေးချယ်မှုပုံစံများ၊ လိင်မှုဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုများနှင့်ပတ်သက်သောသဘောထားများကိုချဉ်းကပ်ခြင်း၊ မရေရာဒွိဟအောက်မှာအလားအလာရလဒ်များ၏ဖြစ်နိုင်ခြေနှင့်ပမာဏကိုစစ်ကြောစီရင်သည်။ ဤတွေ့ရှိချက်အချို့သည် PPU နှင့်အတူလူနာများ၏လက်တွေ့နမူနာများတွင်လေ့လာမှုမှလည်းကောင်း၊ SA / HD / CSBD နှင့် PPU ကိုသူတို့၏အဓိကလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြproblemနာအဖြစ်ဖော်ထုတ်ခြင်းမှရရှိသည်။ Mulhauser et al ။ , 2014, Sklenarik et al ။ , 2019ဤသည်ပုံပျက်သိမြင်မှုဖြစ်စဉ်များ PPU '' အထိခိုက်မခံ '' ညွှန်းကိန်းဖွဲ့စည်းစေခြင်းငှါအကြံပြုခြင်း။
သုံးသပ်ချက်အပြည့်အစုံ PDF Compulsive Sexual Behaviour Disorder - ICD-11 နှင့်မိတ်ဆက်ပေးသောရောဂါအသစ်၏ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်၊ လက်ရှိသက်သေအထောက်အထားများနှင့်လက်ရှိသုတေသနစိန်ခေါ်မှုများ (၂၀၂၁) - Abstract:
လေ့လာမှုပေါင်းမြောက်များစွာသည်ညစ်ညမ်းသောသုံးစွဲသူများနှင့်လိင်စွဲလမ်းသူများ၏ ဦး နှောက်ကိုတိုက်ရိုက်စစ်ဆေးခဲ့သည် ဒီစာမျက်နှာ ဝေဖန်မှုများနှင့်မြင့်မားမေးခွန်းထုတ်စရာများနှင့်အထင်မြင်မှားစေသောလေ့လာမှုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာများအတွက်):
လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ Desire မဟုတ်ဘဲ Hypersexuality, လိင်ပုံများ (2013) ကရူးနှမ်း Neurophysiological တုံ့ပြန်ချက်မှ Related ဖြစ်ပါတယ် - [လျော့နည်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒဆက်နွယ်နေကြောင်း သာ. ကြီးမြတ် cue-reactivity ကို: ထိခိုက်စေလေ့] - ဒီ EEG လေ့လာမှုမွှမ်းတင်ခဲ့ပါသည် မီဒီယာ porn / လိင်စွဲလမ်း၏တည်ရှိမှုဆန့်ကျင်သက်သေအထောက်အထားအဖြစ်။ မရဒါ. သံမဏိ et al။ 2013 အမှန်တကယ်ဆင်း-ထိန်းညှိလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒ porn စွဲများနှင့်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုကိုနှစ်ဦးစလုံး၏တည်ရှိမှုဖို့ထောက်ခံမှုချေးငှားသည်။ ရှစ်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်အချင်းချင်းပြန်လည်သုံးသပ်စာတမ်းများအမှန်တရားရှင်းပြ: ၏ peer-ပြန်လည်သုံးသပ်ဝေဖန်မှု သံမဏိ et al ။, 2013.
ဦးနှောက်ဖွဲ့စည်းပုံနှင့်ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံစားသုံးမှုနှင့်အတူ Functional ဆက်သွယ်မှု Associated: Porn အပေါ်ဦးနှောက် (2014) - သိပ္ပံနည်းကျစွဲမှုနှင့်ဆက်စပ်သော ဦး နှောက်ပြောင်းလဲမှုသုံးခုကိုတွေ့ရှိခဲ့သောဂျာမန်လေ့လာမှုသည်ညစ်ညမ်းသောပမာဏနှင့်ဆက်စပ်မှုရှိသည်။ ညစ်ညမ်းမှုပိုများသောကြောင့်ဆုချင့်ချိန်သောနေရာ၌လှုပ်ရှားမှုနည်းလေလေပိုမိုစိတ်ဖိစီးမှု (သည်းခံစိတ်) လိုအပ်လာလေလေဖြစ်သည်။
နှင့် compulsive လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ (2014) မပါဘဲပုဂ္ဂိုလ်များအတွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ Cue reactivity ၏အာရုံကြောဆက်စပ် - လေ့လာမှုတစ်ခုစီးရီးအတွက်ပထမ ဦး ဆုံး။ မူးယစ်ဆေးစွဲသူများနှင့်အရက်သမားများတွင်တွေ့ရသည့်အတိုင်းပင် ဦး နှောက်လှုပ်ရှားမှုသည်အလားတူဖြစ်သည်။ ညစ်ညမ်းသောစွဲသူများသည်လက်ခံထားသောစွဲလမ်းမှုပုံစံနှင့်ပိုမိုကိုက်ညီကြောင်းကိုလည်းတွေ့ရှိရသည် မဟုတ် ပိုပြီး "က" ကြိုက်တယ်။ အခြားအဓိကတွေ့ရှိချက်တစ်ခုမှာ (မီဒီယာတွင်ဖော်ပြထားခြင်းမရှိပါ) ဘာသာရပ်များ၏ ၅၀% ကျော် (ပျမ်းမျှအသက် ၂၅ နှစ်) သည်စစ်မှန်သောမိတ်ဖက်များနှင့်စိုက်ထူခြင်း / နှိုးဆွမှုရရှိရန်အခက်အခဲရှိခဲ့သော်လည်းညစ်ညမ်းမှုနှင့်အတူစိုက်ထူခြင်းကိုရရှိနိုင်သည်။
နှင့် compulsive လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ (2014) မပါဘဲပုဂ္ဂိုလ်များအတွက်လိင်အကဲဆတ်တွေကိုဦးတည် Enhanced အာရုံကိုဘက်လိုက်မှု - တွေ့ရှိချက်များသည်မူးယစ်ဆေးစွဲခြင်းတွင်တွေ့ရသည့်နှင့်ကိုက်ညီသည်။
ပြImagesနာရှိသောသုံးစွဲသူများနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပုံရိပ်များအားဖြင့်အပြုသဘောဆောင်သည့်အလားအလာများ“ Porn စွဲ” နှင့်ကိုက်ညီမှုမရှိသောထိန်းချုပ်မှုများ (၂၀၁၅) - ၂၀၁၃ ခုနှစ်မှ ၂၀၁၃ ဘာသာရပ်များနှင့်နှိုင်းယှဉ်သောနောက်ထပ် SPAN Lab EEG လေ့လာမှု သံမဏိ et al ။ , 2013 တစ်ကယ့်ကိုထိန်းချုပ်အုပ်စု။ ရလဒ်: ထိန်းချုပ်မှု porn စွဲနှိုင်းယှဉ် vanilla ညစ်ညမ်းဓါတ်ပုံများကိုလျော့နည်းတုံ့ပြန်မှုရှိခဲ့ပါတယ်။ ဦးဆောင်ရေးသားသူ, နီကိုးလ် Prause ဤရလဒ်များကို porn စွဲ debunk မလုပ်ပဲ, သေးသည်ဤတွေ့ရှိချက်များနှင့်အတူဿုံ align Kühn & Gallinat (၂၀၁၄), အရာထက်ပိုညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုကို vanilla porn ၏ရုပ်ပုံများကိုတုန့်ပြန်လျော့နည်းဦးနှောက်ကို Activation ဆက်နွယ်နေကြောင်းကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ ကိုး peer-ပြန်လည်သုံးသပ်စာတမ်းများဒီလေ့လာမှုအမှန်တကယ်မကြာခဏ porn အသုံးပြုသူများကို (စွဲလမ်းနှင့်ကိုက်ညီ) တွင် desensitization / လေ့တွေ့ရှိခဲ့ကြောင်းသဘောတူ: ၏ peer-ပြန်လည်သုံးသပ်ဝေဖန်မှု Prause et al။ , 2015
hypersexual ရောဂါ (2015) နဲ့အမျိုးသားများတွင် HPA ဝင်ရိုး dysregulation - အမျိုးသားလိင်စွဲလမ်းသူ (၆၇) ဦး နှင့်အသက်အရွယ်အလိုက်ထိန်းချုပ်မှု (၃၉) ခုပါ ၀ င်သည့်လေ့လာမှုတစ်ခု။ Hypothalamus-Pituitary-Adrenal (HPA) ဝင်ရိုးသည်ကျွန်ုပ်တို့၏စိတ်ဖိစီးမှုတုံ့ပြန်မှုတွင်အဓိကကစားသမားဖြစ်သည်။ စွဲ ဦးနှောက်ရဲ့စိတ်ဖိစီးမှုဆားကစ်ပြောင်းလဲ အလုပ်မဖြစ်တဲ့ HPA ဝင်ရိုးမှဦးဆောင်။ လိင်စွဲ (hypersexuals) ပေါ်မှာဤလေ့လာမှု (ပစ္စည်းဥစ္စာစွဲလမ်းနှင့်အတူတွေ့ရှိချက် mirror ကြောင်းပြောင်းလဲစိတ်ဖိစီးမှုတုံ့ပြန်မှုကိုတွေ့အဆိုပါသတင်းထုတ်ပြန်ချက်).
Hypersexual Disorder ၏ Pathophysiology အတွက် Neuroinflammation ၏အခန်းက္ပ (2016) - ဤလေ့လာမှုကကျန်းမာသန်စွမ်းသောထိန်းချုပ်မှုများနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်လိင်စွဲသူများတွင် Tumor Necrosis Factor (TNF) ပျံ့နှံ့နှုန်းမြင့်မားကြောင်းဖော်ပြခဲ့သည်။ မူးယစ်ဆေးစွဲသူများနှင့်မူးယစ်ဆေးစွဲသည့်တိရိစ္ဆာန်များ (အရက်၊ ဘိန်းဖြူ၊ မက်) တွင် TNF (ရောင်ရမ်းခြင်းအမှတ်အသား) မြင့်မားသောအဆင့်များကိုတွေ့ရှိရသည်။
compulsive လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ: Prefrontal နှင့် limbic အသံအတိုးအကျယ်နှင့် interaction က (2016) - ကျန်းမာသောထိန်းချုပ်မှုများနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါက CSB ဘာသာရပ်များ (ညစ်ညမ်းသောစွဲသူများ) သည်ဘယ်ဘက် amygdala ပမာဏကိုတိုးမြှင့်ခြင်းနှင့် amygdala နှင့် dorsolateral prefrontal cortex DLPFC အကြားအလုပ်လုပ်ဆက်သွယ်မှုကိုလျှော့ချခဲ့သည်။
ပြောင်းလဲအစာစားချင်စိတ်အခြေအနေများနှင့် compulsive လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူနှင့်အတူဘာသာရပ်များအတွက်ဦးနှောက်ကဲ့သို့ရှုပ်ထွေးသောဆက်သွယ်မှု (2016) - အဓိကတွေ့ရှိချက်နှစ်ခုကိုပုံတူပြုလုပ်သည့်ဂျာမန် fMRI လေ့လာမှု Voon et al ။ , 2014 နှင့် Kuhn & Gallinat 2014။ အဓိကတွေ့ရှိချက်များ - CSB အုပ်စုတွင်အစာစားချင်စိတ်အခြေအနေနှင့်အာရုံကြောဆက်သွယ်မှု၏အာရုံကြောဆက်စပ်မှုများကိုပြောင်းလဲခဲ့သည်။ သုတေသီများအဆိုအရပထမပြောင်းလဲမှု - ပိုမိုမြင့်မားသောအမဂဒလာကိုသက်ဝင်လှုပ်ရှားမှုသည် - အေးဆေးတည်ငြိမ်သောအေးစက်မှုကိုရောင်ပြန်ဟပ်နိုင်သည်။ ဒုတိယအပြောင်းအလဲ - ventral striatum နှင့် prefrontal cortex အကြားဆက်သွယ်မှုလျော့နည်းသွားခြင်း - Impulses သတင်းကိုထိန်းချုပ်ရန်စွမ်းရည်ချို့တဲ့ခြင်းအတွက်အမှတ်အသားတစ်ခုဖြစ်နိုင်သည်။ သုတေသီများက“ဤရွေ့ကား [ပွောငျးလဲ] စွဲရောဂါနှင့်ချင်တဲ့ဒေါသစိတ်နဲ့ထိန်းချုပ်လိုငွေပြမှု၏အာရုံကြောဆက်စပ်စုံစမ်းစစ်ဆေးသည်အခြားလေ့လာမှုများနှင့်အတူလိုင်း၌ရှိကြ၏။ " တွေကိုပိုမို amygdalar activation ၏တွေ့ရှိချက်များ (ာင်း) နှင့်အကျိုးကိုစင်တာနှင့် prefrontal cortex (အကြားဆက်သွယ်မှုလျော့နည်းသွားhypofrontality) ပစ္စည်းဥစ္စာစွဲတွင်တွေ့မြင်အဓိက ဦး နှောက်ပြောင်းလဲမှုနှစ်ခုရှိပါတယ်။ ထို့အပြင် compulsive porn သုံးစွဲသူ ၂၀ အနက် ၃ ခုသည်“ အော်ဂဇင် - စိုက်ထူသောရောဂါ” ခံစားခဲ့ရသည်။
Hypersexual Disorder (2017) နှင့်အတူအမျိုးသားများအတွက် HPA ဝင်ရိုးတန်း Related Gene ၏ methylation - ဤတွေ့ရှိချက်သည်လိင်အကျင့်စွဲသူများသည်အလုပ်မဖြစ်သောစိတ်ဖိစီးမှုစနစ်များရှိသည် - စွဲခြင်းကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့အဓိကအာရုံကြော - endocrine ပြောင်းလဲမှု။ လက်ရှိလေ့လာမှုကဗီဇပြောင်းလဲခြင်းသည်လူ့စိတ်ဖိစီးမှုတုန့်ပြန်မှု၏အဓိကကျသည့်ဗီဇပြောင်းလဲခြင်းနှင့်စွဲလမ်းမှုနှင့်နီးကပ်စွာဆက်စပ်မှုရှိကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့သည်
ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံကိုစှဲဖြစ်နိုင်သလား? ပြဿနာညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံအသုံးပြုမှုများအတွက်ကုသမှုရှာအမျိုးသားများအတွက်တစ်ခု fMRI လေ့လာမှု (2017) - ကောက်နှုတ်ချက်: ပြဿနာညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှု (PPU) ဘာသာရပ်များဘာသာရပ်များကိုထိန်းချုပ်ရန်နှင့်နှိုင်းယှဉ်တဲ့အခါမှာအထူးသတွေကိုငွေကြေးအကျိုးအမြတ်ခန့်မှန်းတွေကိုအဘို့အခေါ်ဆောင်သွားဓါတ်ပုံတွေကိုခန့်မှန်းပေမယ့်မ ventral striatum ၏တိုးမြှင့် activation ပြသခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏တွေ့ရှိချက်ပစ္စည်းဥစ္စာများနှင့်လောင်းကစားစွဲလမ်းမှုကိုလေ့လာဘာနဲ့ဆင်တူ, တွေကိုများ၏ anticipatory အပြောင်းအလဲနဲ့အထူးသခေါ်ဆောင်သွားဆုလာဘ်ခန့်မှန်းတွေနဲ့ဆက်စပ်အာရုံကြောများနှင့်အမူအကျင့်ယန္တရားများ PPU ၏ဆေးခန်းသက်ဆိုင်ရာ features တွေလုပ်ဖို့အရေးကြီးဆက်စပ်ကြောင်းအကြံပြုအပ်ပါသည်။
Neurophysiological တွက်ချက်ချဉ်းကပ် (2018) အပေါ်အခြေခံပြီးညစ်ညမ်းစွဲထောက်လှမ်းခြင်း - ကောက်နုတ်ထားပါတယ်: စမ်းသပ်ရလဒ်များစွဲသင်တန်းသားများကို Non-စွဲသင်တန်းသားများကိုနှိုင်းယှဉ်တိုကျရိုကျဦးနှောက်ဒေသတွင်း၌အနိမ့် alpha လှိုင်းတံပိုးလှုပ်ရှားမှုခဲ့ကြောင်းပြသပါ။ အဆိုပါ theta တီးဝိုင်းလည်းစွဲနှင့် Non-စွဲအကြားကွာဟမှုလည်းမရှိပြသပါ။ သို့သော်ဂုဏ်ထူး alpha တီးဝိုင်းအဖြစ်သိသာမဟုတ်ပါဘူး။
မီးခိုးရောင်ကိစ္စလိုငွေပြမှုနှင့်ပြဿနာ hypersexual အပြုအမူ (2018) နဲ့တဦးချင်းစီတို့တွင်သာလွန်ယာယီ gyrus အတွက်ပြောင်းလဲငြိမ်ဝပ်ရာပြည်နယ်ဆက်သွယ်မှု - fMRI လေ့လာမှု။ အကျဉ်းချုပ် - …လေ့လာမှုမီးခိုးရောင်ကိစ္စလိုငွေပြမှုနှင့် PHB နှင့်အတူတစ်ဦးချင်းစီ (လိင်စွဲ) တို့တွင်ယာယီ gyrus အတွက်ပြောင်းလဲ functional ဖြစ်စေဆက်သွယ်မှုပြသခဲ့သည်။ ပို. အရေးကြီးသည်, အမှိန်ဖျော့ဖွဲ့စည်းပုံနှင့် functional ဖြစ်စေဆက်သွယ်မှုအဆိုး PHB ၏ပြင်းထန်မှုနှင့်အတူဆက်နွယ်နေကြောင်းခဲ့ကြသည်။ ဤရွေ့ကားတွေ့ရှိချက် PHB ၏နောက်ခံအာရုံကြောယန္တရားများသို့သစ်ကိုထိုးထွင်းသိမြင်မှုကိုပေးသညျ။
ပြဿနာ Hypersexual အပြုအမူနှင့်အတူပုဂ္ဂိုလ်များအတွက် Stroop Task ကို (2018) စဉ်အတွင်းပြောင်းလဲ Prefrontal နှင့်ယုတ်ညံ့ Parietal လှုပ်ရှားမှု - ထိန်းချုပ်မှုများကို porn / sex စွဲသူများနှင့်နှိုင်းယှဉ်သည့် fMRI နှင့် neuropsychological လေ့လာမှု။ တွေ့ရှိချက်များသည်မူးယစ်ဆေးဝါးစွဲသူများ၏လေ့လာမှုကိုထင်ဟပ်စေသည်။ လိင် / ညစ်ညမ်းစွဲသူများသည်အလုပ်အမှုဆောင်အားနည်းသောပြသနာများဖြစ်ပြီးဆေးစွဲသူများ၏ပြင်းထန်မှုနှင့်ဆက်နွှယ်နေသည့်စမ်းသပ်မှုအတွင်း PFC ၏လုပ်ဆောင်မှုကိုလျော့နည်းစေသည်။ ဤအရာအားလုံးသည်စွဲလမ်းမှု၏ထင်ရှားသောအမှတ်အသားဖြစ်သောပိုမိုညံ့သော prefrontal cortex လုပ်ဆောင်မှုကိုညွှန်ပြသည်။ ၎င်းကိုအသုံးပြုခြင်းကိုထိန်းချုပ်ရန်သို့မဟုတ်တွန်းအားကိုထိန်းချုပ်ရန်မစွမ်းနိုင်ခြင်းဖြစ်သည်။
Compulsive Sexual Behavior Disorder (2021) တွင် erotic cues များသို့ erotic orbitofrontal cortex reactivity - ကောက်နှုတ်ချက်: ပိုမိုကောင်းမွန်သော parietal cortices, supramarginal gyrus, pre and postcentral gyrus, နှင့် basal ganglia တို့ပါ ၀ င်သော CSBD ဘာသာရပ်များတွင်လေ့လာတွေ့ရှိရသောလုပ်ဆောင်ချက်ပုံစံသည်အာရုံစူးစိုက်မှု၊ somatosensory နှင့်မော်တာဆုလာဘ်များချဉ်းကပ်မှုနှင့်စားသုံးမှု (ပြင်းထန်လိုမှု) ကိုပိုမိုပြင်းထန်လာစေသောအချက်များဖြစ်နိုင်သည်။ ) ခန့်မှန်းချက်အချက်များဖြင့်နှိုးဆော်သော CSBD တွင် ၎င်းသည်စွဲလမ်းစေသောအပြုအမူများ၌ cue-reactivity ၏စွဲမက်စေသောသဘောတရားနှင့်ရှိပြီးသားအချက်များနှင့်အညီဖြစ်သည်။
အောက်ပါ neuro-စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလေ့လာမှုများအထက်ပါအာရုံကြောလေ့လာမှုများမှထောက်ခံမှု add:
မတိုင်မီကအထက်ပါလေ့လာမှုများမှ YBOP အင်တာနက်ညစ်ညမ်းစွဲကိုမှန်ကန်ခဲ့ကြောင်းပြောဆိုထားသည်နှင့်အခြားစှဲတွင်တွေ့မြင်ကဲ့သို့တူညီသောအခြေခံဦးနှောက်အပြောင်းအလဲများကိုစေ၏။ အခြေခံဇီဝကမ္မဗေဒမူးယစ်ဆေးအသစ်သို့မဟုတ်ကွဲပြားခြားနားသောဘာမှဖန်တီးမပေးပါဘူးဆိုတဲ့အချက်ကိုအပေါ်မှာကျိန်းဝပ်သောကွောငျ့ကြှနျုပျတို့သညျဤပြောဆိုချက်ကိုအတွက်ယုံကြည်မှုရှိသည် ဖြစ်. , သူတို့ရိုးရိုးသာမန်ဦးနှောက်လုပ်ငန်းဆောင်တာကိုတိုးမြှင့်သို့မဟုတ်လျော့ကျသွားသည်။ ကျနော်တို့ပြီးသားစွဲ (နို့တိုက်သတ္တဝါငယ်တွေမိတ်လိုက် / Bond / စျြခွငျးမတ်ေတာ circuitry) အဘို့နှင့် (ကယ်လိုရီသိုလှောင်ရာသီအဖော်ရှာ) binging များအတွက်စက်ယန္တရားဝင်စား။ ထိုမှတပါး, စွဲသုတေသနနှစ်ပေါင်းရှင်းလင်းစွာဆိုင်းဘုတ်များ, ရောဂါလက္ခဏာနှင့်အပြုအမူ (များ၏ပုံမှန်ကြယ်အတွက်ရောင်ပြန်ဟပ်, စွဲတစ်ခုတည်းအခွအေနေကြောင်းသရုပ်ပြပါပြီသဘာဝဆုလာဘ်များ, Neuroplasticity, နှင့် Non-မူးယစ်ဆေးစွဲ (2011).
အင်တာနက်ကညစ်ညမ်းအသုံးပြုသူများအပေါ်ဒီလေ့လာမှုတွေဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ 380 ကျော်အံ့သြစရာမရှိပါအဖြစ်လာသင့်တယ် ဦးနှောက်လေ့လာမှုများ ပြီးသား "အင်တာနက်စွဲ" ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ကြောင်းအတည်ပြုခဲ့သည် တူညီတဲ့အဓိကစွဲ-related ဦးနှောက်အပြောင်းအလဲများ အားလုံးစွဲထဲမှာပေါ်ပေါက်ပါတယ်။ များစွာသောအကဲဖြတ်မှုအခြေခံသောအင်တာနက်စွဲမှုလေ့လာမှုများသည် ဦး နှောက်လေ့လာမှုများကိုတွေ့ရှိခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ အင်တာနက်ညစ်ညမ်းမှု၊ အင်တာနက်ဂိမ်းကစားခြင်းနှင့်လူမှုမီဒီယာများကိုယခုအခါသီးခြား application များ (သို့) အင်တာနက်အမျိုးအစားခွဲများအဖြစ်ရှုမြင်နေကြသည်။ “ ယေဘုယျအားဖြင့်အင်တာနက်စွဲလမ်းမှု” မရှိသော်လည်းလူတစ် ဦး ကို Facebook သို့မဟုတ်အင်တာနက် porn များတွင်စွဲစေနိုင်သည်။ ၂၀၀၆ ဒတ်ခ်ျလေ့လာမှုတစ်ခုတွင် erotica ၌ရှိသည်ဟုတွေ့ရှိခဲ့သည် အမြင့်မားဆုံးစွဲလမ်းအလားအလာ အားလုံး Internet application များ၏။
“ ငါတို့အားလုံးမှာအစားအသောက်နဲ့လိင်ကိစ္စကိုအကျိုးပြုစေတဲ့ ဦး နှောက်ဆုိုင်ရာအစီအစဉ်တွေရှိတယ်။ တကယ်တော့ဒါကရှင်သန်မှုယန္တရားတစ်ခုပဲ။ ကျန်းမာသော ဦး နှောက်တစ်ခုတွင်ဤဆုများ၌ကျေနပ်ရောင့်ရဲမှုအတွက်သို့မဟုတ်တုန့်ပြန်ရန်ယန္တရားများရှိသည်။ စွဲလမ်းနေသူတစ် ဦး အနေဖြင့်တိုက်နယ်သည်ပုံမှန်မဟုတ်သောအခြေအနေသို့ရောက်ရှိသွားသည်။ သို့မှသာလူတစ် ဦး ချင်းစီ၏သတင်းစကားသည်ပိုမိုထိရောက်လာမည်။ ၎င်းသည် ၀ တ္ထုများနှင့်အပြုအမူများအသုံးပြုခြင်းဖြင့်ဆုလာဘ်များနှင့် / သို့မဟုတ်ကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းများကိုရောဂါဗေဒလိုက်စားရန် ဦး တည်သည်။
၎င်း၏ faq ရဲ့၌တည်၏ ASAM အထူးသလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူစှဲကိုင်တွယ်ဖြေရှင်း:
အဖြေ: ASAM ၏အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်သည်စွဲလမ်းမှုသည်အကျိုးဖြစ်ထွန်းစေသောအပြုအမူများနှင့်မည်သို့ဆက်စပ်ပုံကိုဖော်ပြခြင်းအားဖြင့်စွဲလမ်းမှုကိုပစ္စည်းဥစ္စာမှီခိုမှုနှင့်တူညီခြင်းမှကင်းဝေးစေသည်။ ... ဤအဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်ကစွဲလမ်းမှုသည်လည်ပတ်မှုနှင့် ဦး နှောက်ပတ် ၀ န်းကျင်နှင့်ပတ်သက်ပြီးစွဲလမ်းမှုရှိသည့်လူများ၏ ဦး နှောက်၏တည်ဆောက်ပုံနှင့်လုပ်ဆောင်ပုံနှင့်ဆက်စပ်မှုမရှိကြောင်းဖော်ပြသည်။ ... အစားအစာနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများနှင့်လောင်းကစားခြင်းအပြုအမူများသည်ဤစွဲလမ်းမှု၏အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်တွင်ဖော်ပြထားသော "အကျိုးကျေးဇူးများကိုရှာဖွေခြင်း" နှင့်ဆက်စပ်နိုင်သည်။
အဆိုပါကြီးတွေသတင်းကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့အဆိုပါ DSM-5 ရဲ့အမှားတညျ့ထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။ ICD-11 ၏အသစ်ထုတ်ဝေ "အတွက်တစ်ဦးရောဂါလက္ခဏာတွေကိုပါဝင်သည်compulsive လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူရောဂါ"အဖြစ်ကောင်းစွာအဖြစ်ဘို့တ"စွဲလမ်းမှုကြောင့် disorders အပြုအမူတွေ"။ ဤတွင်ရဲ့ လက်ရှိအဆိုပြုထားဘာသာစကား:
porn အသုံးပြုမှုနှုန်း (အများအားဖြင့်မဟုတ်ဘဲသီးသန့်မြီးကောင်ပေါက်)
“ Horny and တစ်ခုခုကိုကြည့်လိုသောဆန္ဒ” - လိင်ကွဲပြားမှုဆိုင်ရာအမျိုးသားများ၏ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကြည့်ရှုလေ့လာခြင်းဆိုင်ရာလေ့လာမှုဆိုင်ရာအရည်အသွေးဆိုင်ရာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း (၂၀၂၀)
အင်တာနက်ဂိမ်းကစားခြင်းပြofနာ၏အယူအဆများကို အခြေခံ၍ အွန်လိုင်းညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေနှင့်လူမှုကွန်ယက် ၀ က်ဘ်ဆိုက်များကိုပြproblemနာများအသုံးပြုခြင်းကိုအကဲဖြတ်ရန်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာချဉ်းကပ်မှု (၂၀၂၀)
လိင်နှင့်ညစ်ညမ်းသောအစွဲစွဲလမ်းမှုအတွက်အုပ်စုလိုက်အလုပ်လုပ်ခြင်း၏အရည်အချင်းများနှင့် ပတ်သတ်၍ ဂရုပြုသူများ၏ထင်မြင်ချက်ကိုအကြောင်းအရာအလိုက်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း (၂၀၂၀)
လိင်မှုကိစ္စကို ၀ ယ်သူအမျိုးသားများသည်မလုပ်သောအမျိုးသားများနှင့်ကွဲပြားပါသလား။ ဆွီဒင်နိုင်ငံရှိကျပန်းလူ ဦး ရေစစ်တမ်း (၂၀၂၀) တွင်အခြေခံသောလိင်ဘဝသွင်ပြင်လက္ခဏာများကိုရှာဖွေခြင်း။
Playboy (နှင့်မိန်းကလေး) သည်ဆက်ဆံရေးပြProbleနာများနောက်ကွယ်မှစံများသည်အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးများအားညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကြည့်ရှုခြင်းနှင့်ဆက်စပ်နေသလား။ (၂၀၂၀)
လိင်ဆိုင်ရာအလုပ်လုပ်ခြင်းဆိုင်ရာပြProbleနာများသည်အများအားဖြင့်ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံများအသုံးပြုခြင်းနှင့် / သို့မဟုတ်ပြProbleနာဆိုင်ရာညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများအသုံးပြုခြင်းနှင့်ဆက်စပ်နေပါသလား။ အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးများပါ ၀ င်သောလူထုအခြေပြုစစ်တမ်း၏ရလဒ် (၂၀၂၀)
ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများ၊ ကိုယ်ခန္ဓာပုံနှင့်လိင်ဆိုင်ရာပုံသဏ္betweenာန်များအကြားဆက်နွယ်မှု - စနစ်တကျပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း (၂၀၂၀)
ညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံများအကြားဆက်စပ်မှုများ (၂၀၂၁) စုံတွဲများတွင်ကြိမ်နှုန်း၊ ညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံများကိုလှုံ့ဆော်ခြင်းနှင့်လိင်သာယာဝပြောခြင်းတို့ကိုအသုံးပြုပါ။
အီတလီလိင်တူချစ်သူများနှင့်အမျိုးသားနှစ်မျိုးလုံးတွင်ကိုယ်ခန္ဓာပုံရိပ်၊ စိတ်ဓာတ်ကျမှုနှင့်ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျအပြာစာပေစွဲစွဲစွဲလမ်းမှု - ဆက်ဆံရေး၏ကျေနပ်ရောင့်ရဲမှုအခန်းကဏ္ ((၂၀၂၁)
ကျပန်း၊ ကွန်ဒုံးမရှိသောလိင်၊ အပြာစာပေထုတ်ဖော်မှုအတိုင်းအတာ၊
တိတ်တိတ်နေခြင်းဖြင့်ပြောင်းလဲခြင်း - ဘာဝနာအားအသုံးချသည့်အခါလိင်တူဆက်ဆံသူအမျိုးသားများ၏အရည်အသွေးကောင်းမွန်သောစူးစမ်းရှာဖွေခြင်းသည်ပြperနာဆိုင်ရာညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများအသုံးပြုမှုအတွက်ကြားဝင်ဖြန်ဖြေခြင်း (၂၀၂၀)
ပြProbleနာဆိုင်ရာညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေအသုံးပြုမှုနှင့်ဆက်စပ်သောသိမြင်မှုဖြစ်စဉ်များ - စမ်းသပ်လေ့လာမှုများကိုစနစ်တကျပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း (၂၀၂၁)
မသင်မနေရအင်တာနက်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများအသုံးပြုခြင်းနှင့်စိတ်ကျန်းမာရေး - အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားများ၏နမူနာကိုလေ့လာခြင်း (၂၀၂၁)
နှောင်းပိုင်းဘဝ၌အတင်းအဓမ္မညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံလွှာအသုံးပြုခြင်း - ဖြစ်ရပ်မှန်အစီရင်ခံစာ (၂၀၁၉၉)
အတင်းအဓမ္မလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစော်ကားမှု - သိမှုဆိုင်ရာသိသာထင်ရှားမှုကွဲပြားခြားနားမှုများ၊
ကွန်ဒုံးအသုံးပြုခြင်း, ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံစားသုံးမှုနှင့်အရွယ်ရောက်အမေရိကန်အထီးတစ်နမူနာများတွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြန်ကြားရေးအဖြစ်ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံ၏သဘောထားအမြင်ဆိုင်ရာ (2019)
လိင်တူချစ်သူအမျိုးသားတစ် ဦး တွင် Cybersex စွဲလမ်းမှု - အမှုတွဲအစီရင်ခံစာ
ဆွစ်ဇာလန်လူငယ်များအကြားဆိုက်ဘာဆက်စ်အသုံးပြုခြင်းနှင့်ပြandနာရှိသည့်ဆိုက်ဘာဆက်စ်အသုံးပြုခြင်း - လူမှုဗေဒဆိုင်ရာ၊ လိင်နှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြောင်းရင်းများ (၂၀၁၉၉)
ဒီဂျစ်တယ်နည်းပညာများနှင့်လိင် - အင်တာနက်နှင့်စမတ်ဖုန်းများသည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကြည့်ရှုခြင်းနှင့်အခြားလိင်ဆိုင်ရာအပြုအမူများအပေါ်လွှမ်းမိုးမှု (၂၀၂၀)
မတူကွဲပြားသောလိင်ဆိုင်ရာအပြုအမူများနှင့်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများအသုံးပြုခြင်း - ၁၄ နှစ်မှ ၆၀ နှစ်အကြားရှိအမေရိကန်များအားတစ်နိုင်ငံလုံးကိုယ်စားပြုကိုယ်စားပြုနိုင်မှုဖြစ်နိုင်ခြေစစ်တမ်းမှတွေ့ရှိချက်များ (၂၀၂၀)
အစာစားခြင်းမမှန်သည့်အမျိုးသမီးများအတွက်ခွဲခြားသတ်မှတ်ထားသောလိင်မှု - ကလေးဘဝစိတ်ထိခိုက်အတွေ့အကြုံများ၏အခန်းကဏ္ ((၂၀၂၀)
Erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှု: အကောင်းဆုံးရလဒ်အတွက်ဘက်စုံကုသမှုရွေးချယ်စရာများကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း (2019)
စိတ်၏မျက်လုံးများမှထွက်ပြေးခြင်း - တိကျသောအွန်လိုင်းလှုပ်ရှားမှုများအကြားတွင်မတော်လျော်သောကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းသည့်ယန္တရားအဖြစ်လိုလားသည်။
ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေ၊ အင်တာနက်အသုံးပြုမှု၊ လူမှုဆက်သွယ်ရေးကွန်ရက်နှင့်အွန်လိုင်းဂိမ်းကစားခြင်းတို့၏အသုံးပြုမှုအကြိမ်ရေ၊ ကိုယ်ကျင့်တရားဆိုင်ရာမကိုက်ညီမှုနှင့်ဘာသာရေးနှင့်သူတို့၏ကိုယ်ပိုင်ယူဆမှုစွဲလမ်းမှုနှင့်သူတို့၏ဆက်ဆံရေး (၂၀၂၀)
Hypersexual မူမမှန်: လက်တွေ့တင်ဆက်မှုနှင့်ကုသမှု (2019)
Porno စွဲ၏ပုံစံအတွက် Hypersexuality: လက်တွေ့လေ့လာရေး (2020)
ငါ (Dis) ဒါမျိုးကြိုက်တယ်: ကျားမ, အပြာစာပေနှင့်လိင်ကြိုက်နှစ်သက်ခြင်း။
ဒီလုပ်ငန်းနယ်ပယ်မှာမင်းဟာမင်းမဟုတ်တော့ဘူး” ဆွီဒင်နိုင်ငံရှိအပြာစာပေထုတ်လုပ်မှုတွင်အမျိုးသမီးများ၏အတွေ့အကြုံများကိုလေ့လာခြင်း (၂၀၂၁)
COVID-19 Pandemic - အင်တာနက်နှင့်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုအသုံးပြုခြင်း - ထိခိုက်မှုနှင့်ယူဆနိုင်သည့်အရာ (၂၀၂၁)
စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာရောဂါ၊ Paraphilia (မ်ား) နှင့်အတူ (သို့) မပါရှိခြင်း (သို့) လူတို့တွင် Paraphilic Disorder (သို့) အမျိုးသားများအတွက်အင်တာနက်မှအုပ်ချုပ်သောသိမှုအပြုအမူကုထုံး - ရှေ့ပြေးလေ့လာမှု (၂၀၂၀)
အားလုံးသည်ကျွန်ုပ်၏ ဦး ခေါင်း၌ရှိသလော Self- အစီရင်ခံ Psychogenic Erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုနှင့်စိတ်ကျရောဂါလူမှုမီဒီယာအပေါ်အကွံဉာဏျရှာလူငယ်များအကြားအဖြစ်များသော (2020)
Gonzo အပြာစာပေနှင့်ကွန်ဒုံးအသုံးပြုခြင်းကိုကိုရီးယားအမျိုးသားများ၏စိတ်ဝင်စားမှု (၂၀၂၀)
ညစ်ညမ်းမှုနှင့်အန္တရာယ်ရှိသောလိင်ဆိုင်ရာအပြုအမူများအကြားဆက်နွယ်မှုများနှင့် ပတ်သက်၍ ယူကေအစိုးရအတွက်စာပေပြန်လည်သုံးသပ်သည်
အမျိုးသားစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှု - တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်း (2003)
အထီးလိင်ဆိုင်ရာရောဂါများ - စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကုထုံးအတွက်ရွေးချယ်စရာများ (၂၀၂၀)
ကိုယ်ဝန်ဆောင်အန်ဒရိုဂျင်ထိတွေ့မှုအမှတ်အသားများသည်လူငယ်များအတွက်အွန်လိုင်းလိင်မှုဆိုင်ရာပါ ၀ င်မှုနှင့် Erectile Function နှင့်ဆက်စပ်နေသည် (2021)
Self- ရိပ်မိပြproblemနာအပြာစာပေရုပ်ပုံအသုံးပြုမှုကိုအမျိုးသားများအတွက် ၀ င်ရောက်စွက်ဖက်ခြင်းအဖြစ်တရားအားထုတ်ရန်
ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုကြည့်ရှုသောအမျိုးသားများသည် erectile disfunction ကိုပိုမိုခံစားရလေ့ရှိပြီးတတိယမြောက်လိင်မှုကိစ္စပြုခြင်းထက်အရွယ်ရောက်ပြီးသောရုပ်ရှင်ကိုကြည့်ခြင်းဖြင့်ပိုမိုနှိုးဆွနိုင်သည် (Daily Mail)
စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးပညာရှင်များကလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူဆိုင်ရာရောဂါများကိုရောဂါရှာဖွေခြင်း - ဖောက်သည်များ၏ကျား / မနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတိမ်းညွတ်မှုသည်အရေးကြီးပါသလား။ (2019)
အင်တာနက်ညစ်ညမ်းဆေးစွဲခြင်းကုသမှုတွင် Nalmefene - ဖြစ်ရပ်မှန်အစီရင်ခံစာနှင့်စာပေပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း (၂၀၂၀)
လိင်မှုဆိုင်ရာအပြုအမူဆိုင်ရာရောဂါရှိ Naltrexone - အမျိုးသားနှစ်ဆယ်၏ဖြစ်နိုင်ခြေလေ့လာချက် (၂၀၂၀)
အနုတ်လက္ခဏာဘဝကပွဲများနှင့်ပြုစုပျိုးထောင်ခြင်းအတွက် psychotic-လိုပဲအတွေ့အကြုံများနဲ့ဆက်စပ်နေတဲ့အချက်များအဖြစ်ပြဿနာကအင်တာနက်အသုံးပြုမှု (2019)
ယခုသင်၏ကုထုံးဆရာသို့မဟုတ် MD သည်ပြpornနာရှိသောညစ်ညမ်းရုပ်ပုံအသုံးပြုခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ ပညာဆည်းပူးနိုင်ပြီဖြစ်သည်။
မတော်မတရားလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူဆိုင်ရာရောဂါ (CSBD) ၏ဖြစ်တည်မှုနှင့်လက်တွေ့လက္ခဏာများ - လွတ်လပ်သောရပ်ရွာလူထုနှစ်ခုမှနမူနာကောက်ယူခြင်း (၂၀၂၀)
အွန်လိုင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြစ်မှုကျူးလွန်သူများ - အမျိုးအစားများ၊ အကဲဖြတ်ခြင်း၊ ကုသခြင်းနှင့်ကာကွယ်ခြင်း (၂၀၂၀)
Cybersex သို့လမ်းကြောင်းများ - ဖြစ်ရပ်မှန်အစီရင်ခံစာအခြေပြုစူးစမ်းရှာဖွေခြင်း (၂၀၂၀)
ဖောက်ပြန်မှုနှင့် ပတ်သတ်၍ လိင်၊ စိတ်ခံစားမှု၊ ဆိုက်ဘာနှင့်လူမှုရေးဆိုင်ရာအပြုအမူများကိုနှိုင်းယှဉ်ခြင်း (2019)
စိတ်ကြွစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်စိတ်ကြွစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ကြွစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာတုံ့ပြန်မှုများနှင့်စိတ်ကြွစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ကြွစိတ်ကျရောဂါ (၂၀၂၀) ။
porn တွင် TIME Project မှ: Porn စွဲခြင်းနှင့်အာရုံစူးစိုက်မှုကိုနှောင့်အယှက် (2019)
လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလိင်အင်္ဂါများ - လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအရလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအရလိင်အပျော်အပါးကိုလိင်တူဆက်ဆံသူများ (၂၀၂၀)
ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေစွဲလမ်းမှု - အာရုံစူးစိုက်မှုနှင့်စားသုံးမှုပြင်းထန်မှု (၂၀၁၉၉)
ဘဝ၌အပြာစာပေနှင့်ရည်ရွယ်ချက် - အလယ်အလတ်ရှိသောဖျန်ဖြေခြင်းဆန်းစစ်ခြင်း (၂၀၂၀)
ထွန်းသစ်စအမေရိကန်အရွယ်ရောက်သူများတွင်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေသုံးစွဲမှုနှင့်ကွန်ဒုံးမရှိသောလိင် - ၂၀၂၁ ခုနှစ်တွင်တစ်နိုင်ငံလုံးကိုယ်စားပြုစစ်တမ်းမှရရှိသောရလဒ်များ။
ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများအသုံးပြုခြင်းနှင့်အချစ်ဇာတ်လမ်းများ - နေ့စဉ်ဒိုင်ယာရီလေ့လာမှု (၂၀၂၀)
COVID-19 ရောဂါကူးစက်မှု (၂၀၂၀) တွင်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများအသုံးပြုခြင်း
Transcranial သံလိုက်လှုံ့ဆော်မှုကိုအတင်းအကျပ်လိင်အပြုအမူအားအပြုသဘောဆောင်တုံ့ပြန်မှု (၂၀၂၀)
မိမိကိုယ်ကိုအွန်လိုင်းပေါ်ရှိလိင်ဆိုင်ရာရှင်းလင်းပြတ်သားသောရုပ်ပုံများ (သို့) ဗွီဒီယိုများကိုတင်ခြင်းကိုစိတ်ဓာတ်မကျခြင်းနှင့်လိင်မှုလွန်ကဲခြင်းတို့နှင့်ဆက်နွှယ်သော်လည်းအမေရိကန်စစ်ပြန်များ၏နမူနာတွင်စိတ်ပညာဗေဒ၏အတိုင်းအတာမဟုတ်ပါ (2019)
ကောလိပ်ကျောင်းသားတစ် ဦး အကြားစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအလွဲသုံးစားမှုကိုခန့်မှန်းခြင်း (၂၀၂၀)
ပြ2020နာရှိသောညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများကိုကြည့်ခြင်းအားဖြင့်အမေရိကန်ပြန်လာသောအမေရိကန်စစ်ပြန်များ၊ စွဲလမ်းစေသောအပြုအမူများ (၂၀၂၀)
လိင်မှုဆိုင်ရာသဘောဆန္ဒအလျောက်ပေးပို့ခြင်းတွင်ပါ ၀ င်ရန်စိတ်အားထက်သန်မှုကိုကြိုတင်ခန့်မှန်းခြင်း - ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေ၏အခန်းကဏ္ and နှင့်လိင်ဆိုင်ရာအယူအဆများ (၂၀၂၀)
ဘွဲ့ကြိုဆေးကျောင်းသားများအကြားညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံများနှင့် ပတ်သက်၍ ပြProbleနာဆိုင်ရာညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံအသုံးပြုခြင်းနှင့်သဘောထားများပျံ့နှံ့ခြင်း (၂၀၂၁)
ယောက်ျားများတွင်ပြonlineနာရှိသောအွန်လိုင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုများ - မိမိကိုယ်ကိုလေးစားမှု၊ အထီးကျန်ခြင်းနှင့်လူမှုရေးဆိုင်ရာစိုးရိမ်ပူပန်ခြင်း (၂၀၂၀)
ကြီးမားသော (၅) ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးရှုထောင့်မှပြနာဆိုင်ရာညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကြည့်ရှုခြင်း (၂၀၁၉၉)
တရုတ်နှင့်ဟန်ဂေရီရှိလူထုနှင့်နမူနာခွဲများတွင်ပြProbleနာရှိသောညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေသုံးစွဲမှုပမာဏ (PPCS-18) ၏ဂုဏ်သတ္တိများ (၂၀၂၀)
လိင်အင်္ဂါမလိုက်နာသောလိင်အပြုအမူဆိုင်ရာရောဂါ (CSBD) တွင်စိတ်ရောဂါဖြစ်ပွားမှု (၂၀၂၀)
ဆိုက်ဘာလိင်သုံးစွဲမှုပုံစံများ၊ တားဆီးထိန်းချုပ်မှုနှင့်ယောက်ျားများအားလိင်စိတ်ကျေနပ်မှုအဆင့်အကြားဆက်ဆံရေး (၂၀၂၁)
၀ တ္ထုအလွဲသုံးစားမှုအတွက်လူနေအိမ်ရာမှကုသမှုခံယူသောအမျိုးသားများအကြားအန္တရာယ်ရှိသောလိင်ဆိုင်ရာအပြုအမူများ - မသင်မနေရလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ၏အခန်းကဏ္ ((၂၀၂၀)
စစ်ဘက်ဆိုင်ရာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစော်ကားနှောင့်ယှက်ခြင်းသို့မဟုတ်စော်ကားခံရခြင်းအတွက်အပြုသဘောဆောင်သောစစ်ဆေးခြင်းစစ်မှုထမ်းခြင်း၊ စစ်မှုထမ်းခြင်းတွင်လိင်မှုကိစ္စပိုမိုမြင့်မားသောလိင်အပြုအမူနှင့်ဆက်စပ်နေသည် (၂၀၂၀)
တူရကီတွင်လိင်စွဲမှု - အမျိုးသားအသိုင်းအဝိုင်းနမူနာနှင့်အတူအကြီးစားစစ်တမ်း (၂၀၂၁)
စကင်နာတွင်လိင်ဆိုင်ရာမက်လုံးပေးနှောင့်နှေးမှု - လိင်ဆိုင်ရာပြandနာနှင့်ဆုလာဘ်အပြောင်းအလဲနှင့်ပြpornနာရှိသောညစ်ညမ်းသောစားသုံးမှုနှင့်လိင်ဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုနှင့်ဆက်စပ်မှုများ (၂၀၂၁)
လိင်မှုဆိုင်ရာအန္တရာယ်အပြုအမူများနှင့်ဆိုက်ဘာဆက်စ်ကိုအသုံးပြုခြင်း - ဆိုက်ဘာဆက်စ်အသုံးပြုမှု၏ကွဲပြားခြားနားသောကိုယ်ရေးရာဇဝင်များကိုနှိုင်းယှဉ်ခြင်း (2019)
အလားအလာရှိသောအမူအကျင့်စွဲလမ်းမှုအတွက်ကာလတိုရှောင်ကြဉ်ခြင်းအကျိုးသက်ရောက်မှုများ - စနစ်တကျပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း (၂၀၂၀)
လူမှုရေးဆိုင်ရာစိုးရိမ်ပူပန်မှု၊ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများအသုံးပြုခြင်းနှင့်အထီးကျန်ခြင်း - တစ် ဦး ကစေ့စပ်ဖြန်ဖြေခြင်းခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း (2021)
ညစ်ညမ်းမှုကိုအသုံးပြုခြင်းသို့မဟုတ်လိင် / လိင်စွဲခြင်းနှင့်ဆက်စပ်သောလေ့လာမှုများသည်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှုများနှင့်ပိုမိုဆိုးရွားသည့်လိင်ဆက်ဆံမှုနှင့်ဆက်ဆံရေးကိုကျေနပ်ရောင့်ရဲစေသည်
COVID-19 ကူးစက်ရောဂါ (၂၀၂၀) ၏အခြေအနေတွင်အစားထိုးစွဲလမ်းမှု
မစဉ်းစားမဆင်ခြင်သောအမျိုးသားများ၊ ကုသမှုနမူနာတစ်ခုတွင်ပြmနာရှိသောညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများအသုံးပြုခြင်း၏လက္ခဏာများ - ကွန်ရက်ချဉ်းကပ်မှု (၂၀၂၀)
ပြProbleနာကိုအင်တာနက်ညစ်ညမ်းစာပေအသုံးပြုမှုကိုအကဲဖြတ်ခြင်း - နည်းလမ်းသုံးမျိုးနှင့်ရောနှောထားသောနည်းလမ်းများနှင့်နှိုင်းယှဉ်ခြင်း (၂၀၂၀)
အမှောင်ထုနှင့်ရိုးသားမှု - နှိမ့်ချခြင်း - ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများအသုံးပြုခြင်းနှင့်ပတ်သက်သောပဏာမလေ့လာမှု
စိတ်ရောဂါပညာပေးအဖွဲ့၏ထိရောက်သောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူဆိုင်ရာရောဂါ (CSBD) ကိုကုသရာတွင်ထိရောက်မှု - သုံးလနှင့်ခြောက်လနောက်ဆက်တွဲ (၂၀၂၀) တွင် CORE OM ကိုအသုံးပြုခြင်းနှင့်လက်တွေ့ရလဒ်များ။
ထွန်းသစ်စနည်းပညာများမှထိခိုက်မှုအနည်းဆုံးအတွက်သီအိုရီ၏မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောအခန်းကဏ္။ ။ ကော်မတီမှာရှုံးနိမ့်လား။ •မှတ်ချက် - ထွန်းသစ်စနည်းပညာများပါ ၀ င်သောပြသနာများကိုဖြေရှင်းနိုင်ခြင်း။
ပျင်းခြင်းနှင့်လိင်ကွဲပြားမှုစပ်ကြားဆက်စပ်မှု - စနစ်တကျပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း (၂၀၂၀)
hypersexuality ၏ဆိုးကျိုးသက်ရောက်မှုများ - Hypersexual အပြုအမူအကျိုးဆက်များအတိုင်းအတာနှင့်ယင်းနှင့်ဆက်နွယ်နေသည့်ကြီးမားသော non- လက်တွေ့နမူနာတွင် (၂၀၂၀) အချက်၏ဖွဲ့စည်းပုံကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း
အိမ်တွင်းနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်မှုများတွင်သေစေနိုင်သောမဟုတ်သော strangulation ၏အာရုံကြောဆိုင်ရာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရလဒ်များ - စနစ်တကျပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း
Parapilic စိတ် ၀ င်စားမှုများ Czech Czech လူ ဦး ရေတွင် ဦး စားပေး - Preference, Arousal, Pornography, Fantasy နှင့် Behaviour ကိုအသုံးပြုခြင်း (၂၀၂၀)
ဘာလင် - ယေးလ်လိင်စွဲလမ်းမှု၏စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဂုဏ်သတ္တိများ (၂၀၂၀)
Baudrillardʾ သီအိုရီအရဘဝကျေနပ်မှုနှင့်အိပ်စက်ခြင်းအရည်အသွေးနှင့်ကြေးနန်းရုပ်ရှင် Porno Movies တွင် Hyper အစစ်အမှန်မြင်တွေ့နိုင်သည့်လက္ခဏာများအကြားဆက်နွယ်မှု။
ပြProbleနာဆိုင်ရာညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေသုံးစွဲမှုပမာဏ (PPCS-6) ၏တိုတောင်းသောဗားရှင်း - ယေဘုယျအားဖြင့်ယုံကြည်စိတ်ချရသောနှင့်ခိုင်လုံသောအတိုင်းအတာနှင့်ကုသမှုခံယူသောလူ ဦး ရေ (၂၀၂၀)
ပြProbleနာ Hypersexuality များအတွက်သုံးရောဂါ; မည်သည့်စံသတ်မှတ်ချက်များကအကူအညီရှာနေသည့်အပြုအမူကိုဟောကိန်းထုတ်သနည်း။ (၂၀၂၀)
အင်တာနက်စွဲလမ်းမှု၊ လိင်စွဲလမ်းမှုနှင့်အတင်းအကျပ်ဝယ်ယူမှုများအတွက်ကုသမှုများ။ meta-analysis (၂၀၂၀)
မိမိကိုယ်ကိုအစီရင်ခံသောအမူအကျင့်စွဲခြင်းနှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုရောဂါများနှင့်စိတ်ကျန်းမာရေးပြbetweenနာများအကြားထူးခြားသောနှိုင်းယှဉ်မှုများ - ဆွစ်ဇာလန်လူငယ်နမူနာများ၏တူညီသောဆန်းစစ်ချက် (၂၀၂၀)
ညစ်ညမ်းသောဝက်ဘ်ဆိုက်ကိုအသုံးမပြုခြင်း - စုံတွဲများအကြားညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေသုတေသနအတွက်စီစဉ်ဖွဲ့စည်းမှုကိုတည်ဆောက်ခြင်း (2019)
အမျိုးမျိုးသောညစ်ညမ်းရုပ်ပုံလွှာပါဝင်သောအကြောင်းအရာများနှင့်ကုသမှုရှာဖွေခြင်းနှင့်ပြaticနာရှိသောလိင်ဆိုင်ရာအပြုအမူလက္ခဏာများ (၂၀၂၀) နှင့်ဆက်စပ်သည့်အပြာရုပ်ပုံများအသုံးပြုမှုအကြာဆုံးတွေ့ဆုံခြင်း
VR“ Empathy Machine” ဆိုတာဘာလဲ။ Virtual Reality Pornography တွင်မိမိကိုယ်ကိုနှင့်အခြားသူများ၏သဘောထား (၂၀၂၀)
ဆယ်ကျော်သက်များကိုစွဲလမ်းစေသည့်အင်တာနက် ၀ န်ဆောင်မှုအမျိုးအစားများ။ အင်တာနက်ပြProbleနာနှင့်ဆက်စပ်နေသော (၂၀၂၀)
အဖြူရောင်အရာဝတ္ထုနှင့်ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံနှင့်လိင်ဆိုင်ရာအပြုအမူဆိုင်ရာရောဂါ - Diffusion Tensor Imaging study (2021)
ကလေးညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများအသုံးပြုသူများကိုမောင်းနှင်စေသောအရာ - ရာဇ ၀ တ်မှုဆိုင်ရာပညာရှင်တစ် ဦး ကသူ၏သိလိုစိတ်ကိုအားဖြည့်ပေးသူတိုင်းနီးပါးသူ့အားပိုကောင်းအောင်လုပ်နိုင်သည်ဟုဆိုသည်။ (2019)
Goa အတွက် (L) 40 ကောလိပ်၏ရာခိုင်နှုန်းနှင့်ပိုမိုမြင့်မားအလယ်တန်းကျောင်းတွင်ယောက်ျားလေးမုဒိမ်းမှု porn (2014) စောင့်ကြည့်
(L) နီးပါးအားလုံး Young ကအို (2016) ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံလောင်
(L) Hypersexuality ကြောင့် Call မနေပါနဲ့ကိုငါတို့သ Term လိင်စွဲလမ်းလိုအပ်ဘယ်ကြောင့်လင်ဒါ Hatch, Ph.D အားဖြင့်
(L) အင်တာနက်ညစ်ညမ်းမှုကြောင့်အမျိုးသမီးများသည်အမျိုးသားလိင်ကြင်ဖော်ဖက်များက 'မကျေနပ်မှု' ခံစားနေရသည်
(L) ကိုညစ်ညမ်းထိတွေ့အထက်တန်းကျောင်းကျောင်းသားများ, 80% စွဲ၏ 13.5% ထက်ပို, လေ့လာမှုကဆိုပါတယ်။ (2013)
(L) ဆယ်ကျော်သက် Porn စွဲဘို့နယူးကုသမှု & Models ။ Linda Hatch, Ph.D အားဖြင့်
ကလေးကအလွဲသုံးစားမှုနှင့်ဆက်စပ် (L) Porn (2015)
(L) ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံနှင့်ဦးနှောက်ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးကိုစဉ်းစား (2015), Donald ဟီလ်တန် MD အားဖြင့်
(L) ကိုအကဲခတ် porn နေမကောင်းအမျိုးသမီးများကိုစွန့်ခွာနိုင်သည်လေ့လာမှု (2014)
(L) အမျိုးသမီးများအဖွဲ့ချုပ်ရုံယောက်ျားများနှင့်အမျှအွန်လိုင်း Porn စွဲအမျှ Be နိုင်သလား, လေ့လာ Says
(L) Young ကဂျပန်ကလူ (2017) လိင်ဆက်ဆံကြသည်မဟုတ်
သဘာဝတရား၏တံဆိပ်ခေါင်းပြောင်းခြင်း: ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံစွဲ, Neuroplasticity, နှင့် ASAM နှင့် DSM ပတ်သ က်. ။ (2012)
တိရိစ္ဆာန်လေ့လာမှု (2011) တွင်အရွယ်ရောက်ပြီးသူခန္ဓာကိုယ်နဲ့စိတ်ကိုဒုက္ခနှင့်ဆက်စပ် (L) ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်လိင်,
(L) ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံအသုံးပြုမှုတစ်ခုကအမှန်တကယ်ဦးနှောက်စွဲဖြစ်လာနိုင်သလား? (2011)
(L) Group ကလိင်ဆယ်ကျော်သက်မိန်းကလေးများအစီရင်ခံစာနှောင့်ယှက်ဘို့နောက်ဆုံးပေါ်လမ်းကြောင်းသစ် (2011) မှထုတ်ဖော်ပြသနေသည်
(L) ကိုသိပ္ပံပညာရှင်များက: လွန်းသည်အင်တာနက် Porn (2011) သင်ျခြိုဖြစ်ပေါ်စေ